Bible Mu Nsɛm Yefta Bɔhyɛ No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WOAHYƐ bɔ bi pɛn a akyiri yi wuhui sɛ ɛyɛ den sɛ wubedi so? Ɔbarima a ɔwɔ mfonini yi mu no yɛɛ saa, na ɛno nti na ne werɛ ahow yi. Ɔbarima yi yɛ Israel temmufo kokodurufo a wɔfrɛ no Yefta.
Yefta traa ase bere a na Israelfo nsom Yehowa bio. Na wɔreyɛ nneɛma bɔne bio. Enti Yehowa maa Amonfo haw wɔn. Eyi maa Israelfo su frɛɛ Yehowa sɛ: ‘Yɛayɛ wo bɔne. Yɛsrɛ wo, gye yɛn!’
Nkurɔfo no dii awerɛhow wɔ nneɛma bɔne a wɔayɛ no ho. Wɔkyerɛe sɛ wɔanu wɔn ho denam Yehowa a wɔsan som no bio no so. Enti Yehowa boaa wɔn bio.
Nkurɔfo no paw Yefta ma wako atia Amonfo a wonnye koraa no. Yefta pɛe sɛ Yehowa boa no wɔ ɔko no mu. Enti ɔhyɛɛ Yehowa bɔ sɛ: ‘Sɛ woma midi Amonfo so nkonim a, onipa a odi kan a ofi me fie bɛba abehyia me bere a mifi nkonimdi mu resan aba no, mede no bɛma wo.’
Yehowa tiee Yefta bɔhyɛ no, na ɔboaa no ma odii nkonim. Bere a Yefta san baa fie no, wunim onipa a odii kan behyiaa no? Ɛyɛ ne babea, a ɔyɛ ne ba koro. Yefta teɛɛm sɛ: ‘Ao, me ba. Awerɛhosɛm bɛn na woama ato me yi. Nanso mahyɛ Yehowa bɔ, na mintumi nsakra no.’
Bere a Yefta babea no tee ne bɔhyɛ no, mfiase no ɔno nso ne werɛ howee. Efisɛ na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ofi n’agya ne ne nnamfonom nkyɛn. Nanso na ɔde ne nkwa nna a aka nyinaa bɛsom Yehowa wɔ ne ntamadan mu wɔ Silo. Enti ɔka kyerɛɛ n’agya sɛ: ‘Sɛ woahyɛ Yehowa bɔ a, ɛsɛ sɛ wudi so.’
Enti Yefta babea no kɔɔ Silo, na ɔde ne nkwa nna a aka nyinaa som Yehowa wɔ ne ntamadan mu. Nnannan wɔ afe biara mu no Israelfo mmea kɔsra no wɔ hɔ, na wɔn nyinaa ani gye. Nkurɔfo ani gyee Yefta babea no ho kɛse efisɛ na ɔyɛ Yehowa somfo pa.
Atemmufo 10:6-18; 11:1-40.
Hena ne Yefta, na bere bɛn na ɔtraa ase?
Ɛbɔ bɛn na Yefta hyɛɛ Yehowa?
Bere a Yefta kodii Amonfo so nkonim wiei a ɔbaa fie no, adɛn nti na ne werɛ howee?
Bere a Yefta babea no tee nea ne papa aka akyerɛ Yehowa no, dɛn na ɔkae?
Adɛn nti na na nkurɔfo no pɛ Yefta babea no asɛm?
Kenkan Atemmufo 10:6-18.
Kɔkɔbɔ bɛn na ɛsɛ sɛ yenya fi asoɔden a Israel yɛɛ tiaa Yehowa no mu? (Atem. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Adi. 2:10)
Kenkan Atemmufo 11:1-11, 29-40.
Yɛyɛ dɛn hu sɛ ka a Yefta kae sɛ ɔde ne babea no bɛbɔ “afɔre mũ” no nkyerɛ sɛ ɔhyew no sɛnea wɔbɔ ɔhyew afɔre? (Atem. 11:31; Lev. 16:24; Deut. 18:10, 12)
Ɔkwan bɛn so na Yefta de ne babea no bɔɔ afɔre?
Dɛn na yebetumi asua afi nea Yefta yɛe wɔ ɛbɔ a ɔhyɛɛ Yehowa no ho? (Atem. 11:35, 39; Ɔsɛnk. 5:4, 5; Mat. 16:24)
Ɔkwan bɛn so na Yefta babea no yɛ nhwɛso pa ma Kristofo mmabun sɛ wɔde wɔn bere nyinaa bɛsom? (Atem. 11:36; Mat. 6:33; Filip. 3:8)